Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Ny ankamaroan'ny mpizaha tany Hawaii dia nanao vaksiny feno tamin'ny COVID-19
Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao momba ny fahasalamana • Hita • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • Kamaainas • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Mpizaha tany Hawaii
Ny Hawaii Tourism Authority (HTA) dia namoaka ny valin'ny fandalinana fikarohana manokana farany natao, izay nanadihady ireo mpitsidika avy amin'ny tanibe amerikana izay nitsidika an'i Hawaii ny 15 May ka hatramin'ny 24 May 2021, mba handrefesana ny zavatra niainany tamin'ny fandaharanasa Safe Travels an'i Hawaii sy ny fahafaham-po amin'ny dia manontolo.
Ity ny fanadihadiana fitsidihana fahatelo an'ny andiany izay natomboka tamin'ny faran'ny taona lasa.
Saika ny rehetra (89 isan-jato) tamin'ireo mpitsidika natao tamin'ity fandalinana farany ity dia nilaza fa nanao vaksiny tanteraka.
Ireo mpitsidika miverimberina dia azo inoana fa hatao vaksiny feno miaraka amin'ireo nahazo diplaoma tamin'ny oniversite sy ireo manana karama ao an-trano mihoatra ny $ 100,000.
Ny ankamaroan'ny mpitsidika (76 isan-jato) dia nanisa ny diany ho "Tsara", nihena kely hatramin'ny martsa (82 isan-jato) ary Desambra / Janoary (85 isan-jato). Ny olana lehibe indrindra (30 isan-jato) noresahin'ireo mpandray valiny mikasika ny fahaizany voafetra na ny fisian'ny trano fisakafoanana sy ny manintona.
Na dia nijanona teo aza ny fameperana COVID-19 nandritra ny diany, 82 isan-jaton'ny mpitsidika no nilaza fa afaka nanao ny zava-drehetra na ny ankamaroan'ny hetsika nokasain'izy ireo.
Ny fanadihadiana natao farany dia nanambara ihany koa fa ireo mpitsidika manana fidiram-bola ao an-trano latsaky ny $ 100,000 dia afa-po kokoa tamin'ny diany noho ireo manana karama ao an-trano mihoatra ny $ 100,000. Ankoatr'izay, ireo izay nitsidika nosy iray monja dia afa-po kokoa noho ireo izay nitsidika nosy maro.
Rehefa nanontaniana momba ny zavatra niainany ny 93 isan-jaton'ny valinteny dia nanisy ny hatsaram-panahin'ny mpiasa sy ny mponina ho "Tsara" na "Ambony Salanisa". Ny ankamaroan'ny mpitsidika dia nanome isa ny trano fandraisam-bahiny (na toerana onenany) ho tsara.
Nandritra ny Mey 2021, an'i Hawaii Dia an-tsambo Ny programa dia namela ny ankamaroan'ny mpandeha tonga avy any ivelan'ny fanjakana sy ny dia lavitra nifindrafindra mba hamaky ilay quarantine 10 andro tsy maintsy atao miaraka amin'ny valin'ny fitsapana COVID-19 NAAT ratsy azo avy amin'ny valiny Mpiara-miasa amin'ny fitsapana azo itokisana.
Mikasika ny dia tsara, ireo isa dia nijanona somary nifanaraka hatrany nandritra ny telo fanadihadiana, izay saika ny mpitsidika rehetra (98 isan-jato) no mahalala ireo protokolà fitsapana mialoha ny dia nataon'i Hawaii alohan'ny niaingany ny fanjakan'izy ireo. Ny isan-jaton'ny mpitsidika izay nilaza fa nanana fahasahiranana mialoha ny fahatongavana dia mbola niova ihany koa; na izany aza, betsaka kokoa ny olona toa nanana olana tamin'ny tranokalan'ny Safe Travels an'i Hawaii (29 isan-jato tamin'ny volana Jona vs. 17 isan-jato tamin'ny Martsa vs. 9 isan-jato tamin'ny Desambra / Janoary).
Maherin'ny antsasaky ny 56 isan-jaton'ireo namaly no nilaza fa hitsidika an'i Hawaii indray izy ireo na inona na inona fepetra takiana alohan'ny fitsidihana, 23 isan-jato no nilaza fa hitsidika azy ireo indray rehefa tapitra ny areti-mandringana, 11 isan-jato no nilaza fa hitsidika izy ireo rehefa tsy misy quarantine na fitsapana ilaina. , ary 10 isan-jato no nilaza fa tsy mikasa ny hiverina any Hawaii izy ireo.
Ny Division Research Research an'ny HTA dia nanao fifanarahana momba ny Fikarohana momba ny Antolojia mba hitarika ny fanadihadiana an-tserasera eo anelanelan'ny 2 Jona sy 8 Jona 2021, ao anatin'ny fifanarahana momba ny Fahafaham-po sy ny fandalinana ny hetsika ataon'ny mpitsidika. Ny valin'ny Fampianarana COVID-2021 mpitsidika Jona 19 dia natolotra nandritra ny fivorian'ny talen'ny talen'ny HTA tamin'ny 24 Jona.